ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်း ဗီယက်နမ်- မြန်မာရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအသင်း (AVIM) နှင့် ဗီယက်နမ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဘဏ် (BIDV) အဖွဲ့တို့အား တွေ့ဆုံ | Pyithu Hluttaw
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်း ဗီယက်နမ်- မြန်မာရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအသင်း (AVIM) နှင့် ဗီယက်နမ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဘဏ် (BIDV) အဖွဲ့တို့အား တွေ့ဆုံ
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် နာယက၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်းသည် ဗီယက်နမ်- မြန်မာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအသင်း (AVIM) နှင့် ဗီယက်နမ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဘဏ် (BIDV) ပူးတွဲဥက္ကဋ္ဌ H.E. Mr. Tran Bac Ha နှင့်အဖွဲ့ဝင်များအား စက်တင်ဘာလ ၇ ရက်နေ့ နံနက် ၁၀၀၀ နာရီချိန်တွင် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ၊ ဟနွိုင်းမြို့၊ BIDV တာဝါ၌ တွေ့ဆုံသည်။
ထိုသို့တွေ့ဆုံစဉ် ဗီယက်နမ်- မြန်မာ နှစ်နိုင်ငံအကြား စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး၊ ခရီးသွားလုပ်ငန်းနှင့် ဘဏ်လုပ်ငန်းများတွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် နှစ်ဦးနှစ်ဖက် အကျိုးစီးပွားများစွာဖြစ်ထွန်းနိုင်ပါကြောင်း၊ ယခုအခါ မိမိတို့နိုင်ငံသည် ဈေးကွက်စီးပွားရေး စနစ် ကျင့်သုံးနေသောကာလဖြစ်သဖြင့် အခြားစီးပွားရေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများနှင့် ပြိုင်ဆိုင် ဆောင်ရွက်ရမည် ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ အနေဖြင့်လည်း ယှဉ်ပြိုင်နိုင်သော အရည်အသွေးများရှိနေပြီဟု ယုံကြည်ပါကြောင်းဖြင့် ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာ ဆွေးနွေးကြသည်
တွေ့ဆုံပွဲအပြီးတွင် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် နာယကနှင့် မြန်မာလွှတ်တော် ချစ်ကြည်ရေးကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား ဗီယက်နမ်- မြန်မာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအသင်း (AVIM) နှင့် ဗီယက်နမ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဘဏ် (BIDV) ပူးတွဲဥက္ကဋ္ဌ H.E. Mr. Tran Bac Ha က BIDV တာဝါ၌ နေ့လယ်စာဖြင့် တည်ခင်းဧည့်ခံခဲ့သည်။
အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲသို့ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာယကနှင့်အတူ ပြည်သူ့လွှတ်တော်နှင့် အမျိုးသားလွှတ်တော်တို့မှ ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌများဖြစ်ကြသော ဦးသိန်းဇော်၊ ဦးလှမြင့်ဦး၊ ဦးဋ္ဌေးမြင့်၊ ဒေါက်တာခင်ရွှေ၊ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံဆိုင်ရာ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး ဦးဝင်းလှိုင် နှင့် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ရုံးမှ တာဝန်ရှိသူများတက်ရောက်ကြပြီး ဗီယက်နမ်- မြန်မာရင်းနှီး မြှုပ်နှံသူများအသင်း (AVIM) နှင့် ဗီယက်နမ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဘဏ် (BIDV) ပူးတွဲဥက္ကဋ္ဌ H.E. Mr. Tran Bac Ha နှင့်အတူ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ၊ စိုက်ပျိုးရေးနှင့် ကျေးလက် ဖွံ့ဖြိုးရေး ဝန်ကြီး H.E. Mr. Cao Duc Phat နှင့် ဗီယက်နမ် အမျိုးသားလွှတ်တော်မှ အရာရှိများ တက်ရောက် ကြသည်။
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် နာယကနှင့် မြန်မာလွှတ်တော် ချစ်ကြည်ရေးကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့သည် စက်တင်ဘာလ ၇ ရက်နေ့ ဒေသစံတော်ချိန် ၁၄၃၀ နာရီချိန်တွင် လေကြောင်း ခရီးဖြင့် ဆက်လက်ထွက်ခွာ လာရာ ဟိုချီမင်းမြို၊ Tan Son Nhat လေဆိပ်သို့ ညနေ ၁၆၃၀ နာရီချိန်တွင် ရောက်ရှိကြပြီး ဟိုချီမင်းမြို့ ဒုတိယကောင်စစ်ဝန် Mrs. Truong Thi Anh ၊ ဟိုချီမင်းမြို့၊ ပြည်ပဆက်ဆံရေးဋ္ဌာန ဒုတိယအကြီးအကဲ Mr. Tran Phuoc Anh နှင့် တာဝန်ရှိသူများက လေဆိပ်တွင် ကြိုဆိုကြသည်။